Loop & Tie: B2B Outreach Onyinye Bụ Ugbu A Azụahịa Ahịa Na AppExchange Market | Martech Zone
Otu ihe m na-akụziri ndị mmadụ na ahịa B2B bụ na ịzụ ahịa ka dị onye, ọbụlagodi mgbe gị na nnukwu ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ. Ndị na-eme mkpebi na-echegbu onwe ha banyere ọrụ ha, nrụgide nrụgide ha, olu ọrụ ha, na ọbụna ịnụ ụtọ ọrụ ha kwa ụbọchị. Dịka ọrụ B2B ma ọ bụ onye na-eweta ngwaahịa, ahụmịhe nke iso nzukọ gị na-arụ ọrụ ga-akarị ihe mgbapụta n'ezie.
Mgbe mbụ m bidoro azụmahịa m, ihe a tụrụ m n’anya. Naanị m lekwasịrị anya n'ihe niile m na-enyefe ka m nwee ike ịzụ ahịa ka mma. O juru m anya mgbe ndị ahịa na-agwa anyị na anyị na-agagharị ngwa ngwa ma ọ bụ na-eme ọtụtụ mgbanwe. Ka oge na-aga, amalitere m ileba anya na otu m ga-esi nye nzukọ ha uru karịa na mwepụta nke nkwupụta ọrụ anyị. Otu mpaghara bụ onyinye… naanị ihe ncheta echebara echiche maka ekele iji mee ka ụbọchị ha dị mfe.
Ekere ụfọdụ n'ime ha ahaziri, ndị ọzọ metụtara azụmahịa. Mgbe otu n’ime ndị ahịa m kwagara n’ebe ọhụrụ mara mma, azụrụ m kọfị ebe a na-ere naanị otu kọfị. Mgbe onye ahia m bidoro pọdkastị, azụrụ m ha igwefoto vidiyo na-enyo-enyo. Maka onye ọzọ, azụrụ m tiketi maka ọrụ ebere ebe onye nchịkwa NFL nọ na-ekwu okwu. Mgbe otu onye ahịa mụrụ nwa mbụ ha, azụrụ m ihe mara mma na ndepụta nke ha chọrọ.
Onyinye bụ nnukwu ụzọ iji gbanwee ahụmịhe onye ọrụ, mana emechara ya nke ọma. Mgbe m rụrụ ọrụ n’otu akwụkwọ akụkọ a na-ebipụta n’obodo, m na-ele ngalaba mgbasa ozi anya ka ha na-enye ndị buru ibu, ndị na-akpọsa ngwa ahịa, akwụkwọ tiketi. Ọ bụghị a onyinye, ọ toro na-atụ anya. Onyinye ahaziri iche ma nwee ike ịgbanwe mmekọrịta.
M na-emeghe ma na-eme ihe n'eziokwu na ndị ahịa mgbe ha kelere m na ha, n'ikpeazụ, kwụrụ ụgwọ maka onyinye ahụ site na ohere ha nyere m.
Loop & Kee
Loop & Tie bụ nyiwe njikọ aka nke na-enyere azụmaahịa jikọọ na ndị ahịa site na nka inye onyinye. Nhọrọ a na-enye onyinye na-enye obi ụtọ na echiche nke ekele dị mkpa maka mmekọrịta ndị ahịa na-adịte aka. M gbara ajụjụ ọnụ banyere onye guzobere ha, Sara Rodell, na Podcast anyị.
Kemgbe 2011, Loop & Tie agbanweela ụzọ azụmaahịa si eche banyere inye onyinye. Na-akpaghasị ụlọ ọrụ onyinye ụlọ ọrụ $ 125B, isi ihe a na-enye onyinye na-eme ka azụmaahịa dochie anya usoro a na-eme nke izigara otu onye ahụ otu ihe na-agwụ ike, nke zuru oke.
Kama nke ahụ, ndị na-ezipụ ihe na-emepụta mkpokọta onyinye echekwa nke nwere ihe sitere na obere azụmaahịa 500. Ndị nnata wee họrọ ihe kachasị amasị ha ma ọ bụ họrọ inye onyinye ya maka ọrụ ebere, na-eme ka onyinye ahụ bụrụ isi iyi ọhụrụ nke data na nkwukọrịta.
Nleta Loop & Tie
Loop & Tie amalitela ngwa ọhụrụ maka Salesforce. Site na Loop & Tie's gift gifting platform, ndị ọrụ nwere ike izipu otu ma ọ bụ 10,000 onyinye n'ime naanị nkeji. Ugbu a dị maka nbudata site na AppExchange, ndị ọrụ nwere ike ịwụnye ngwa ahụ na enweghị nhịahụ gafee usoro Salesforce ha wee bido izipu onyinye na atụmanya na ndị ahịa ozugbo.
Na Loop & Tie, anyị na-eche mgbe niile banyere ụzọ anyị ga - esi jiri ike teknụzụ nyere ndị mmadụ aka ijikọ. Ihe anyị na-eme iji mata ma mee ibe anyị obi ụtọ site n'inye onyinye bụ echiche mara mma, nke na-adịghị agafe agafe. Site n'inye ndị ọrụ Salesforce ikike izipu onyinye ozugbo site na ngwa ha, anyị nwere ike ngwa ngwa nyekwuo ahụmịhe onyinye onyinye maka ụlọ ọrụ.
Sara Rodell, Onye guzobere na onye isi nke Loop & Tie
Ndị ọrụ Loop & Tie nwere mmasi ịkekọta CRM ha na onyinye ha na-enye aka nwere ike ịdabere na Salesforce dị ka ntọala ụlọ ha maka ịdebe mmekọrịta ndị ahịa yana ịgbasa ozi. Site na ịgbakwunye onyinye dị ka ngwa ọrụ aka n'ime ahịa Salesforce, Loop & Tie na-enyere ndị ọrụ aka ịkwalite ndị ahịa ha site na iji mgbanwe, echefu echefu.
Ihe mkpuchi onyinye Loop & Tie na - emeputa ihe omuma ndi bara uru nke na - egosi ihe ndi choro maka igha na uzo. Iwulite n'ime Salesforce na enyere ndi kompeni aka ka ha weputa ihe na-echebara echiche nke bu isi nkuku nke mmekorita siri ike, ha nile n'ime usoro egwu a na-enyere ndi ahia aka tugharia ROI nke mmemme ha.
Loop & Tie na-enye ahụmịhe ndị ahịa dị iche iche nke na-ewulite mmekọrịta na-adịte aka yana ndị otu data kwesịrị ịghọta nrụpụta ọrụ mkpọsa, ihe niile na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya mara nke ọma, site na inye onyinye, na-akwado obodo dị iche iche, ndị na-eweta obere azụmaahịa.
Hụ Loop & Tie na AppExchange
Tags: ịgbanweeb2b onyinyeahịa outreachCRMahia ndi ahiammemme onyinyeinye onyinyeatụmatụ onyinyeloop & tieloop na eririije ozigbondị ahịaSara rodell